Timaha Timaha: Qeexi Curls, Sida loo sameeyo Kinky Hair Curly 2020
Sidee loola jeedaa timo jilicsan si aad u jilciso timaha
1 samee timaha dabiiciga ah
1.1 Hababka kale:
2 sida loo qeexo curls
2.1 Tallaabada 4, dheji curlaha meel: Ku samee timaha dabiiciga ah:
2.2 Tallaabada 5 dhejisid timahaaga:
samee timaha dabiiciga ah
credit credit: @naturallydidi
Dhammaanteen waxaan dooneynaa inaan si buuxda u jacelno muuqaalkeena timaha dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa mid dhib badan oo aad u jahwareereysa markaad rabto curiyahaaga dabiiciga ah ee aad rabto inaad ku soo baxdid, oo dhamaantiis aad maamuli kartid waa suufka oo eegaya lakab halkan ama meeshaas. Waxaan haystaa timaha 4a 4b, waana jeclahay sida aan u daba galo marka ay qoyaan ka dib markii la dhaqay iyo xaalad qotodheer, laakiin mar marka timaheygu timaado, waxay si isdabajoog ah u dhacdaa. Waxaan u hinaasin jiray kuwa haysta dharka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ilaa aan ka bartay sida loo daryeelo loona shaqeeyo timahayga si sax ah. Waxyaabaha lagaa jeesjeeso Dhaqanka dabiiciga ah ee timo dheer leh waxay ku habboon tahay in la nuugo oo dabadeedna xiro curlaha meel marka ay sameeyaan. Mashruucani wuxuu inta badan u yahay walaashii kuwaas oo haysta timaha 4 sida 4a 4b iyo 4c waxayna rabaan in timahooda ay u eegaan xargaha iyo in badan oo la qeexay.
TALLAABADA 1: Ogow tiknoolajiyadaada oo aad u leedahay rajooyin dhab ah sida waxa timahaagu u eg yahay. Haddii aad leedahay timo 4c dabiiciga ah, ma filan kartid inaad timahaaga u gasho 3b. Taasi waa rajo aan xaqiiq ahayn. Timahaaga ayaa u eegi kara sida ay u egyihiin marka ay si buuxda u biyuhu u buuxsameyso oo ay ku sumoobeen biyo. Caadi ahaan, timuhu waxay u eegi karaan heerarka 1-2 marka ay si fiican u biyoodaan. Trick waa in la qabsado curlsada marka timahaagu ay ku jiraan gobolkaas oo ay ku xiraan meel.
TALLAABADA 2: ogoow heerka dufankaaga timaha: To timaha jilicsan u gasho timo jilicsan, waa inaad fahantaa sida loo saxayo timahaaga si sax ah. Tani
credit credit: @olive_chels
Waxaa lagaa rabaa inaad ogaatid heerka dufanka timahaaga iyo waxyaabaha nooca aad u shaqeyn doonto adiga iyo waxyaabaha kale ee alaabta ka saari doono timahaaga. Haddii aad leedahay duufaan hooseeya, taas macnaheedu waa inay adagtahay in aad qoyo timaha; Si kastaba ha noqotee, marka aad sameysid qoyaan, waxay sii joogeysaa jilicsan. Timaha sare ee dhererka leh ayaa si dhakhso ah u duufsada waxayna nuugaan qoyaan fudud; Si kastaba ha ahaatee, waxay lumisaa qoyaanka si fudud. Gumaadiyaha waxaa loola jeedaa tirada indhaha ee timahaaga timaha. Waxaan haystaa maqaal kale oo qoto dheer ku saabsan diirimaadka halkan.
Haddii dhammaantood ay ku guuldareystaan, waxaad isticmaali kartaa Kinky adigaa adigaa ku daraya fidinta sida timaha googo'aanta leh ee halkan ku yaal,
3c clip-ins, iyo wigs taas oo weli ku siinaysa ficilka dabiiciga ah adigoon u muuqan sida haddii aad xiran tahay kordhinta. Dalabaadka Timaha Wareegga Dabiiciga ah Waxyaabaha adag ee kinkey kinky for kasta oo dabiiciga ah! Taa bedelkeeda, waxaad leedahay timo jilicsan, timo jilicsan, afro kinky, afro kiciya, 4a 4b ama 4c, timaha ugu khatarsan, waxaan kugu soo aragnay adiga.
sida loo qeexo curls
Tallaabada 3 qoyan: Biyuhu waa qaybta ugu wanaagsan ee timaha looga saaro xaaladeeda kinkeeda. Biyuhu waa dheecaan badan oo dhejis ah ayaa kaa dhigi doona. Waxyaabaha ku saabsan biyaha waa qalalan si dhakhso ah, iyo curlahayaga dib ugu soo noqnoqda! Marka timuhu biyo u buuxsamo, oo aysan ka jirin xaalad kinkyeed, tani waa waqtiga ugu wanaagsan ee lagu daro kiriimyada lafaha iyo saliida hawada ugu fiican hawadaada. Glycerin waa saliid biyo ku salaysan oo u galaya timaha timaha. Ma uumi saartaa sida ugu dhakhsaha badan biyaha iyo ka baxdo timaha quruxda leh. Waxaan si wanaagsan ugu talineynaa in la isticmaalo badeecadan saxda ah ka dib markaad sii dayso qalabkaaga. Ka dibna isticmaal kiriimyada kareemka ah iyo kuwa kale ee qoyaan leh.
curls qeexan timaha dabiiciga ah
Tallaabada 4, dheji curlaha meel: Ku samee timaha dabiiciga ah:
Waqtigan xaadirka ah, timahaagu waa inuu ahaado mid qoyan oo qafiif ah. Hadda waqtigeeda si ay u xirtaan curlaha meel ku yaal. Trick-ka si aad uhesho timo jilicsan si aad u eegto xakameyntu waa joojinta yareynta iyo fuuqbaxa. Hadda timahaagu waxay ku jirtaa xaalad adag, waxaad rabtaa inaad codsatid gelitaan doorasho ah. Jeelka ugu jecel yahay waa fiyuusta eco. Hubi in badeecadaha aad geliso timahaaga hore ay si fiican u isku dhafan doonaan jel oo aan ka tegin hadhaaga caanaha ama caddaanka ah. Qaado jelka oo u codso timaha adiga oo aan waxyeellayn curlaha aad abuurtay. Hadda si tartiib ah uga tirtir biyaha biyo xad-dhaaf ah t-shirt hore. Si aad u heshid natiijooyinka ugu fiican, fadhiisanaya qalajiyaha dhererka leh sidaas awgeed jeelku si dhakhso ah ayuu u qalaji karaa wuxuuna ka hortagi karaa inta ugu badan ee suurtogalka ah!
Tallaabada 5 dhejisid timahaaga:
Hadda timahaagu waa qalalan yahay, waa inay eegaan gilgilidda iyo adkaanta. Wixii dhererka dheeraadka ah iyo mugga, waxaan kugula talinayaa inaad qaadato qalajiyaha dhuujinta oo timaha timaha u kala jiido si aad u jajabiso qulqulka jeelka oo u ogolow hawadaada in ay jidhka qabato adiga oo aan dhibin curiyaha aad abuurtay. Markaad timo jilicsanaanta timahaaga si aad u jimicsato timaha adoo isticmaalaya habka qoyaanka iyo habka shaandhaynta, timahaagu xoogaa adag ayuu ka soo galayaa jeelka; Si kastaba ha noqotee, waxay xakameysaa maalinta 2. Waxa kale oo aad samayn kartaa jalaal qalalan oo loogu talagalay walxaha dabiiciga ah.
credit credit: @beatbynesh
tallaabooyinka xinjirta 6: Haddii aadan rabin ama aad jeceshahay in aad isticmaasho gelinta ee aad adigu marwalba sameyn kartid, sariirta ka soo baxa, ama qaababka kale ee wax ka qabanaya nadiifinta timahaaga dabiiciga ah.
Xaqiiqda ku Saabsan Afro Curly Hair
Aragtida iyo Ka Faa'idaysiga Miisaanka Yar
Koritaanka Timahaaga Dabiiciga ah
Cadaalad darada: Cyntoia Brown
Kinky Wig Wig
Xiritaan xariif ah
Top lagu qiimeeyo
Afro Kinky xidhitaanka